आइतबार आकासबाट एउटा चट्टान पृथ्वीतिर आउदैं, पृथ्वीमा ठोक्किए के हुन्छ ? « Pen Nepal
Published On : 18 October, 2020 7:40 am By : पेननेपाल
एजेन्सी । आइतबार ‘ऐस्टराइड २०२० टिजी ६’ पृथ्वीको नजिकैबाट गुज्रदैछ, जसलाई अमेरिकाको (नेशनल ऐरोनाटिकल एण्ड स्पेस ऐडमिनिस्ट्रेशन) नासाले पनि पुष्टि गरेको छ ।
यो पृथ्वी र चन्द्रमाको बीचको धेरै नजिकबाट जानेछ । यसको र्पथ्वीबाट दूरी ८५ हजार ५१९ माइल मात्र हुनेछ । यदी कुनै तिब्र गतिको स्पेस अब्जेक्ट पृथ्वीको ४६.५ लाख माइलभन्दा नजिक आउने सम्भावना भएमा त्यसलाई अन्तरिक्ष संगठनहरूले खतरनाक मान्दछन् ।
नासाको सेन्ट्र सिस्टमले पहिलेनै यसलाई हेरिरहेको हुन्छ । यसबाट आउने १०० वर्षमा यस्ता २२ ओटा ऐस्टराइड छन्, जो र्पथ्वीमा ठोक्किने केही सम्भावना छन् । तर आजको ऐस्टराइड २०२० टिजी ६ पृथ्वीमा ठोक्किने सम्भावना छैन ।
यदी यो पृथ्वीमा ठोक्कियो भने पनि कुनै क्षति हुने छैन । किनभने यो मात्र ९.५ मिटरको छ । यति सानो ऐस्टराइड र्पथ्वीको वायुमण्डलमा प्रवेश गर्नासाथ बलेर खरानी हुन्छन् ।
यो दृश्य फोटोग्राफर र अन्तरिक्ष अध्ययनकर्ताका लागि निकै सुन्दर दृश्य हुन सक्छ । हुनत यो वायुमण्डलमा प्रवेश गर्नासाथ बल्न थाल्नेछ र आगोको मुस्लोजस्तो निश्कनेछ । यसबाट निश्किएको आगोको मुस्लो र ग्यास तारा झरेजस्तो धेरै आकर्षक हुन्छ । त्यसवाहेक नासाले यसबाट धेरै कुरा अध्ययन गर्ने प्रयासमा हरेको छ ।
के हो ऐस्टराइड ?
ऐस्टराइड ती चट्टान हुन्छन्, जो कुनै ग्रहजस्तै सुर्यको परिक्रमा गर्दछन् । तर यो ग्रहहरूभन्दा निकै सानो आकारका हुन्छन् । हाम्रो सौर्य मण्डलमा धेरैजसो ऐस्टराइड मंगल र बृहस्पति ग्रहको ऐस्टराइड क्षेत्रमा पाइन्छन् । यसबाहेक यी अन्य ग्रहको कक्षमा पनि घुमीका हुन्छन् र ग्रहसंगै सुर्यको परिक्रमा गर्दछन् ।
करिब साढे ४ अर्व वर्ष पहिले हाम्रो सौर्य मण्डल बनेको थियो । त्यतिबेलाका ग्यास तथा धुलोको यस्तो बादल जसले कुनै ग्रहको आकार लिन सकेनन् र पछाडि परे, त्यही चट्टान ऐस्टराइडमा परिवर्तित भए ।